ဘ၀ခရီးတစ်ခု၏ ခံစားမှုပုံရိပ် မှတ်တမ်းလေးများ (လင်းလက်ကြယ်စင်): တန်ဖိုးထားရသောစကားစုများ
ဘယ်လိုမျိုးဘ၀ခရီးလမ်းကိုလျှောက်နေသူဖြစ်ပါစေ ၊ အခက်ခဲတွေရှိကြမှာပါပဲ .. ။ အမြင့်မြတ်ဆုံးရင့်ကျက်သူဆိုတာ မရှိသလောက်ရှားပါတယ် .. ။ ရှားတဲ့ထဲမှာမှ ကိုယ်က အတတ်နိုင်ဆုံး အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် နေသွားသင့်တယ်လို့ လင်းကယုံကြည်ခံယူထားတယ် .. ။ လင်းမြတ်နိုးတဲ့ ဒီစကားစုတွေကို လင်းကိုချစ်တဲ့စာဖတ်သူတွေအတွက် အမှတ်တရဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ အဓိကက စိတ်ဓါတ်အင်အားပြည့်ဖို့အတွက်ပါ … ။
၁) ကိုယ်ဘာကိုလုပ်ချင်တယ်ဆိုတာကို ရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြတ်ပြတ်သားသားသိပါ ။ ပြီးတော့ လုပ်သင့်လုပ်ထိုက်တာကို နေ့စဉ်လုပ်နေပါ။ အဲဒီလိုဆိုရင် တစ်နေ၀င်တိုင်း ကိုယ့်ရည်မှန်းချက်နဲ့ ပိုပြီးနီးလာတာကိုတွေ့ရမယ်။
၂) လောကကြီးကိုမြင်ပုံနောက်တစ်မျိုး ရှိသေးတယ်လို့ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်သတိပေးလိုက်ပါ ။ ပြီးတော့ အဲဒီလို နောက်အမြင်တစ်မျိုးကို တွေ့အောင်ရှာမယ်လို့ပြတ်ပြတ်သားသားဆုံးဖြတ်ပါ။
၃) ဒုက္ခဆိုတာ ကိုယ်သွားနေတဲ့လမ်းကိုမီးမောင်းထိုးပြတာပါ။
၄) ပစ္စည်းဥစ္စာ ဆုံးရှုံးတာ ၊ ရာထူးဆုံးရှုံးတာဟာ အကြီးမားဆုံး ဆုံးရှုံးမှု မဟုတ်သေးဘူး ။ ကိုယ့်ရင်ထဲက အမြင့်မြတ်ဆုံး စိတ်ထားဆုံးရှုံးသွားတာကမှ အကြီးမားဆုံး ဆုံးရှုံးမှုဖြစ်တယ်။
၅) ကိုယ့်ဘ၀မှာတွေ့ကြုံရသမျှ အတွေ့အကြုံတွေဟာ လောကကြီးအကြောင်းနဲ့ ကိုယ့်အကြောင်းကို ပြောပြနေပါတယ်။
၆) ကိုယ်ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ ပြင်ပ ပစ္စည်းထက် ကိုယ့်ရင်ထဲက သဘောထားကပိုအရေးကြီးပါတယ်။
၇) ဘ၀ကိုအောင်အောင်မြင်မြင် နေသွားချင်တယ်ဆိုရင် ရုပ်ပိုင်းကိုအဓိကထားတတ်တဲ့ သဘောထားကို ကျော်လွန်ပြီးတော့ စိတ်ပိုင်းကိုပိုပြီး အလေးထားတတ်တဲ့အကျင့်ကိုလုပ်ရမယ်။
၈) ဆုံးရှုံးမှုတွေကို လက်ခံနိုင်တာဟာ အောင်မြင်တဲ့ဘ၀ကို နေနိုင်ရေးမှာ အရေးပါတဲ့ အရည်အချင်းတစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။
၉) ကိုယ်ကြောက်နေတဲ့အရာက ကိုယ့်ကိုအနိုင်ယူထားတယ်။
၁၀) အကြီးမားဆုံး ဆုံးရှုံးမှုနဲ့တွေ့တော့မှပဲ အနက်နဲဆုံး အသိဥာဏ်ကိုရတော့တယ်။
၁၁) သူတစ်ပါးရဲ့ပျော်ရွှင်မှု ၊ အောင်မြင်မှု ၊ တိုးတက်မှုအတွက် ၀မ်းသာနိုင်တာဟာ ကိုယ့်စိတ်ကျန်းမာရေးအတွက် အစွမ်းထက်တဲ့ဆေးဖြစ်ပါတယ်။
၁၃) နှစ်ခါမခံရအောင် ပထမအကြိမ်ကတည်းက သင်ခန်းစာယူလိုက်ပါ။
၁၄) မြေပဲဆံကိုစားချင်ရင် မြေပဲခွံကိုခွဲရတယ်။
၁၅) ငါနဲ့တွေ့တဲ့သူတိုင်းဆီက ပညာယူစရာတွေရှိတယ်။ ငါယူတတ်ရင်ရမယ်။
၁၆) ကိုယ့်ဘ၀မှာ အဆင်မပြေမှုတွေတွေ့နေရတဲ့အခါမှာ ကိုယ့်ကျန်းမာရေးကိုပိုပြီး ဂရုစိုက်ပါ ။ အစားမှန်မှန်စားပါ ။ လမ်းမှန်မှန်လျှောက်ပါ ။ အိပ်ရေးဝအောင်အိပ်ပါ။
၁၇) အခက်အခဲတစ်ခုကို ငါကျော်လွှားခဲ့ပြီ ၊ နောက်တစ်ခါ ဒီထက်ကြီးတဲ့အခက်အခဲကို ငါကျော်လွှားရအုံးမယ်။
၁၈) သင်္ချာမှာပုံသေနည်းဆိုတာရှိတယ် .. ။ ဘ၀မှာပုံသေနည်းမရှိဘူး။
၁၉) ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်လေးစားမှု ၊ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ယုံကြည်မှုဟာ ကိုယ့်ဘ၀တိုးတက်ရေးမှာ အရေးကြီးဆုံးအချက်ဖြစ်တယ်။
၂၀) အခက်ခဲတွေဟာ အင်မတန်အသုံးဝင်ပါတယ်။ အဖိုးတန်ပါတယ်။ အခက်ခဲတွေကို တန်ဖိုးရှိအောင် သုံးတတ်ဖို့လိုပါတယ်။
၂၁) ဒုက္ခကိုရှောင်နေရုံနဲ့ အရည်အသွေးပြည့်ဝတဲ့ဘ၀ကို နေလို့မရနိုင်ဘူး။ လုပ်သင့်တဲ့အလုပ်ကို လုပ်ရမယ်။ အဲဒီအလုပ်ကိုလုပ်လို့ ဒုက္ခတွေ့မယ်ဆိုရင်တောင် ခံနိုင်သလောက် ဒုက္ခကိုခံပြီးဆက်လုပ်ရမယ်။
၂၂) လူတစ်ယောက်အကြောင်း ကောင်းကောင်းသိချင်ရင် သူဒုက္ခရောက်တုန်းမှာ ဘာလုပ်သလဲဆိုတာကို ကြည့်ပါ။
၂၃) စိတ်ထောင်ကျနေတာက ပိုဆိုးပါတယ်။
၂၄) အဆိုးတစ်ခုကိုလွန်မြောက်ချင်ရင် ၊ ပြင်ချင်ရင် အဲဒါဟာအဆိုးပါလို့ ပထမလက်ခံဖို့ လိုတယ်။ အဆိုးကို အဆိုးလို့လက်ခံနိုင်တာဟာ ရင့်ကျက်မှုတစ်မျိုးဖြစ်တယ်။ ရိုးသားမှုလည်းဖြစ်တယ်။ အဲဒါဟာ သတ္တိလည်းဖြစ်တယ်။
၂၅) ကိုယ့်အမှားကို အမှားပါလို့လက်ခံပြီး ပြင်ရဲတဲ့သတ္တိဟာ အကြီးမားဆုံးသတ္တိဖြစ်ပါတယ်။
၂၆) အခက်အခဲနဲ့တွေ့တဲ့အခါ ကံဆိုးလေခြင်းလို့ မတွေးပါနဲ့ ။ ဘာသင်ခန်းစာယူရမလဲလို့ တွေးပါ။
၂၇) ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် လေးစားမှုရှိတဲ့သူဟာ ကိုယ့်ဂုဏ်သိက္ခာကို အသက်နဲ့လဲမယ်။ ငွေနဲ့မလဲဘူး။
၂၈) ရိုးသားမှုရှိဖို့ဟာ ကြီးမားတဲ့သတ္တိလိုတယ်။
၂၉) ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် မညာပါနဲ့။ ဘ၀စာမေးပွဲကို ခိုးဖြေလို့မရပါဘူး။
၃၀) အလုပ်များများလုပ်ဖို့ထက် အလုပ်ကို စေတနာမှန်မှန်နဲ့လုပ်ဖို့က ပိုအရေးကြီးပါတယ်။
၃၁) သူပြောတာကို စိတ်ပါလက်ပါ အာရုံစူးစိုက်ပြီး နားထောင်တာဟာ သူ့ကိုချစ်ခင်လေးစားတာပါ။
၃၂) မိတ်ဆွေကောင်းတစ်ယောက် တိုးလာတာဟာ ကိုယ့်လောကကြီးကျယ်လာတာနဲ့အတူတူပဲ။
၃၃) မိတ်ဆွေကောင်းမရှိတဲ့သူရဲ့ လောကဟာ သိပ်ကျဉ်းမြောင်းတယ်။
၃၄) ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်မြှင့်ချင်ရင် သူများကိုလည်းမြှင့်ပေးပါ။ သူများကိုမြှင့်ပေးလေလေ ကိုယ်လည်းမြှင့်သွားလေလေ။
၃၅) ကောင်းကင်ပျံဖို့စိတ်ထက်သန်နေတဲ့သူဟာ လေးဘက်သွားခိုင်းတာကို ဘယ်လိုမှကျေကျေနပ်နပ် လက်ခံနိုင်မှာ မဟုတ်ဘူး။
၃၆) ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် တကယ်မလေးစားတဲ့သူ ၊ ကိုယ့်စိတ်ထား ၊ ကိုယ့်အရည်အချင်းတွေကို ပိုပြီးမြင့်မားလာအောင် မကြိုးစားတဲ့သူဟာ အများကိုထိထိရောက်ရောက် အကျိုးမပြုနိုင်ဘူး။
၃၇) စည်းကမ်းနဲ့နေ ၊ စည်းကမ်းနဲ့ပြောတတ် လုပ်တတ်တဲ့သူဟာ အင်အားကြီးမားတယ်။ သြဇာရှိတယ်။
၃၈) ကိုယ်ကလွှမ်းမိုးဖို့ မကြိုးစားဘဲနဲ့ ကိုယ့်ရဲ့ဦးဆောင်မှုကို ကျေကျေနပ်နပ် လက်ခံမှသာ ထိထိရောက်ရောက် ဦးဆောင်နိုင်တယ်။
၃၉) ကိုယ့်အကြောင်းကို ကြာရင်လူတွေကသိမှာပါပဲ။ လူအများစုကို ရေရှည်လှည့်စားထားဖို့ မလွယ်ပါဘူး။
၄၀) စဉ်းစဉ်းစားစားလုပ်ပါလျက်နဲ့ မှားသွားရင် အမှားထဲက သင်ခန်းစာရပြီးတော့ အမှားနည်းသွားမယ်။ တိုးတက်လာမယ်။ ဘာမှမလုပ်ရင် ဘာမှမမှားဘူး။ ဘာအတွေ့အကြုံမှ မရဘူး။ ဘာသင်ခန်းစာမှ မရဘူး။ ဘာမှ မတိုးတက်ဘူး။ ဒါကြောင့် ဘာမှမလုပ်ဘဲနေတာကာမှ အကြီးမားဆုံးအမှားဖြစ်တယ်။
၄၁) မှန်တဲ့သဘောထားဟာ အကောင်းဆုံးမိတ်ဆွေဖြစ်တယ်။ မှားနေတဲ့သဘောထားက အဆိုးဆုံးရန်သူဖြစ်တယ်။
၄၂) ကိုယ့်သဘောထားက ကိုယ့်အပြုအမှုကိုလွှမ်းမိုးတယ်။ ကိုယ့်အပြုအမှုက ကိုယ့်အောင်မြင်မှုကို လွှမ်းမိုးတယ်။
၄၃) အောင်မြင်မှုဆိုတာကို အခက်ခဲတွေကြားမှာပဲသိုဝှက်ထားတယ်။
၄၄) သူများ ကိုယ့်ကိုပစ်တဲ့ အုတ်ခဲတွေနဲ့ပဲ ကိုယ့်အတွက် ခိုင်မာတဲ့အုတ်မြစ်ကို ချထားပါတယ်။
၄၅) ကိုယ်လုပ်တဲ့အလုပ်ကို မချစ်တဲ့သူဟာ စစ်မှန်တဲ့အောင်မြင်မှုကို မရနိုင်ဘူး။
၄၆) တကယ်ချစ်တယ်ဆိုရင် လေးလံတဲ့ဝန်လို့လည်းမယူဆဘူး။ အနစ်နာခံတယ်လို့လည်း မယူဆဘူး။
၄၇) မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုပြီး မလုပ်ဘဲနေရင် မဖြစ်ဖို့သေချာတယ်။
၄၈) အခက်ခဲတွေကိုများများကျော်လွှားနိုင်တဲ့သူဟာ အောင်မြင်တဲ့သူဖြစ်တယ်။
၄၉) ကိုယ့်အနားမှာရှိတဲ့ ပစ္စည်းတွေက ကိုယ့်ကိုစိတ်ချမ်းသာမှုပေးမှာမဟုတ်ဘူး။ ကိုယ့်အတွင်းမှာရှိတဲ့ ပြည့်ဝတဲ့ ကိုယ့်သဘောထားကသာ ကိုယ့်ကိုစိတ်ချမ်းသာမှုပေးမယ်။
၅၀) အဆင့်အတန်းဘယ်လောက်ကြီးကြီး သင့်သဘောထားက သေးနေရင် သင်ဟာ သေးသိမ်ငယ်တဲ့သူပဲ။
၅၁) အမှားဆိုတာ ဥာဏ်ကြီးကြီးနဲ့ထပ်ကြိုးစားဖို့အခွင့်အရေးပါ။
၅၂) မဖြစ်မနေလုပ်မယ်ဆိုတဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်ဟာ အောင်မြင်မှုအတွက် အဓိကလိုအပ်ချက်ဖြစ်တယ်။
၅၃) အနာဂတ်အတွက် မျှော်လင့်ချက်မရှိရင် ပစ္စုပ္ပန်မှာ အင်အားမရှိဘူး။
၅၄) ကိုယ်တတ်နိုင်သမျှ အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် လုပ်ပြီးပြီဆိုရင် ဘာလိုသေးလည်း။
၅၅) မေတ္တာ ကရုဏာမှ မရှိရင် ပညာတတ်ရုံလောက်နဲ့ဆို အများအကျိုးကို ဘာလုပ်နိုင်ရမှာလည်း။
၅၆) တာဝန်ကျေရုံမလုပ်ပါနဲ့ ။ နဲနဲပိုလုပ်လိုက်ပါ။
၅၇) ဘ၀ဆိုတာ စွန့်စားခန်းပါ။ မစွန့်စားရင် ဘ၀မရှိဘူး။
၅၈) အမှားထဲက သင်ခန်းစာမယူတာမှ ကြောက်စရာကောင်းတဲ့အမှားဖြစ်တယ်။
၅၉) လူတိုင်းမှာစိတ်ကောင်းရှိပါတယ်။ ကိုယ့်ရဲ့အကောင်းဆုံး စိတ်ထားကို လေးစားဖို့ တန်ဖိုးထားဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။
၆၀) မရိုးမသားလုပ်လို့ ဒုက္ခရောက်ခဲ့ကြတာများပြီး ဒါကိုသင်ခန်းစာမယူဘဲ မရိုးသားတာကိုဆက်ပြီး လုပ်နေကြတာ အံ့သြစရာကောင်းပါတယ်။
၆၁) မရိုးသားတဲ့သူဟာ စိတ်မလုံဘူး။ စိတ်လုံခြုံမှုမရှိဘူး။
၆၂) ဆက်ဆံရေးကောင်းတာဟာ အားလုံးအဆင်ပြေဖို့ အရေးကြီးတဲ့အချက်ဖြစ်တယ်။
၆၃) အပြောကောင်းပြီး သဘောထားဆိုးတာက သိပ်ကြောက်စရာကောင်းပါတယ်။
၆၄) ဘယ်လောက်ပဲ ပညာတတ်တဲ့သူပဲဖြစ်ဖြစ် သူတစ်ယောက်တည်းရဲ့အမြင်ဟာ ဘယ်တော့မှ မပြည့်စုံနိုင်ဘူး။
၆၅) အခက်ခဲနဲ့ကြုံတိုင်း ကြုံတိုင်း မရိုးသားတဲ့နည်းနဲ့ ထွက်ပေါက်တဲ့ရှာသူဟာ ကြာလေလေ အဆင့်နိမ့်သွားလေလေပဲ။
၆၆) မိုးကိုမျှော်ကြည့်ပါ။ ဒါပေမဲ့ ခြေထောက်နဲ့မြေကြီးနဲ့တော့ မလွတ်ပါစေနဲ့။
၆၇) အခက်ခဲရှိတာက ပြဿနာမဟုတ်ဘူး။ ဘာလုပ်ရမှန်းမသိတာကမှ ပြဿနာအစစ်ဖြစ်တယ်။
၆၈) ဘာကိုမှမယုံတော့လို့ ဘာမှမပြတ်သားတဲ့သူဟာ ဘယ်မှာအားတက်နိုငတော့မှာလဲ။
၆၉) လွတ်လပ်မှုဆိုတာ သူ့အလိုလိုရောက်လာတာမဟုတ်ဘူး။ ကိုယ်ကရအောင်လုပ်ယူရတာ။
၇၀) အခုကိုယ့်စိတ်ထဲမှာ အရေးကြီးလှတယ်ထင်ပြီး စိတ်ဆင်းရဲနေတဲ့ကိစ္စဟာ နောက်ခြောက်လ ၊ တစ်နှစ်ကြာတဲ့အခါ ဘာမှအရေးမကြီးတော့တဲ့ကိစ္စဖြစ်သွားမှာပါ။ ကိုယ့်သဘောထားတွေကလည်း ပြောင်းသွားမယ်။ အဲဒါလေးကိုမမေ့ပါနဲ့။
၇၁) အခက်ခဲတွေ ဒုက္ခတွေ ဆုံးရှုံးမှုတွေဟာ လူ့ဘ၀ကို မှန်ဘီလူးနဲ့ကြည့်ရသလို အခွင့်အရေးအမျိုးကို ပေးတယ်။ ကိုယ့်ဘ၀ကိုယ် အနီးကပ်ပြီး ကြည့်ခွင့်ရတယ်။ ဘ၀နဲ့ပတ်သတ်တဲ့ အမှန်တရားတွေဟာ ဘာအတွက်လဲ။ ပျော်ရွှင်မှုဆိုတာ ဘာလဲ။ ဘယ်ဟာကျေနပ်စရာအကောင်းဆုံးလဲ။ ဘ၀မှာ တန်ဖိုးအရှိဆုံးအရာတွေဟာ ဘာတွေလဲဆိုတာ သိလာတယ်။ ဒုက္ခရောက်တဲ့အခါကျမှ မိတ်ဆွေကောင်းဟာ ဘယ်သူလဲဆိုတာလည်း သိရတယ်။ ကိုယ် အင်မတန်အားကိုးခဲ့တဲ့အရာတွေဟာ တကယ်အားကိုးစရာကောင်းရဲ့လား ဆိုတာလည်း သိရတယ်။ အားကိုးစရာအစစ်ဟာ ဘာလဲ။ ဘယ်သူ့ကိုအားကိုးရမလဲ။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် အားကိုးနိုင်ဖို့အရေးကြီးတယ်ဆိုတာလည်း သဘောပေါက်လာတယ်။ ဒါကြောင့် ဒုက္ခတွေ အခက်ခဲတွေဟာ တန်ဖိုးရှိတဲ့ အတွေ့အကြုံဖြစ်ပါတယ်။
That's knowlegeable and benificial. They all seem familiar to us but none of us ever giveaminute to notice them. It's time for me to grow up and be mature now. Thanks for enlightening, linlat.
Double Taxation Avoidance 2